Rug cadaagii Chelsea oo shaqo ka raba England, Henrikh Mkhitaryan oo United €100 million ugu soo biiraya, Conte oo dalbaday mid ka mida dilaayaashii Euro 2016+Dhaq dhaqaaqyadii kale ee ugu dambeyey suuqa – Gool FM
Rug cadaagii Chelsea oo shaqo ka raba England, Henrikh Mkhitaryan oo United €100 million ugu soo biiraya, Conte oo dalbaday mid ka mida dilaayaashii Euro 2016+Dhaq dhaqaaqyadii kale ee ugu dambeyey suuqa
(Muqdisho) 04Luulyo2016. Ramadaan Kariim, aqristeyaal ku soo dhawaada dhaq dhaqaaqyadii ugu dambeyey ee suuqa laga sameyey, waxaa jira heshiisyo si rasmi ah u dhacay iyo qaar wali laga war sugayo.
Guus Hiddink oo raba shaqada England
Guus Hiddink waxa uu rajeneynayaa in uu dhaxlo Roy Hodgson halka xiriirka kubadda cagta ay xiise u qabaan wada xaajoodkiisa, sidaas waxaa qortay The Times.
Saddexdda Libaax waxa ay u gaarsi ugu jiraan badalkii Roy Hodgson kaddib markii ay Iceland ka soo cirib tirtay Euro 2016, Arsene Wenger iyo Sam allardyce ayaa ka mida dadka shaqo loo qishayo.
Hiddink, oo lagu waday in uu ciyaaraha ka fariisto kaddib markii uu si KMG ah u leyliyey Chelsea deedna ku biiray waaxda maamulka sare ee Blues ayaa hada daneenaya in uu mar kale shaqo xul helo.
CV-ka ninka reer Hollnad waxaa qiimeya madaxa fulinta ee FA-ga Martin Glenn, wararka waxa ay qabaan in uu rabo shaqada iyo sidoo kale in uu diyaarin doono qofkii badali lahaa mustaqbalka.
Waxa ay u egtahay door laga siiyey Netherlands markii uu xilka kala wareegay Louis Van Gaal balse si wanaagsan kuma dhamaan waqtigiiii madaama ay Holland u soo bixi weysay Euro 2016.
Dhaqaalaha uu Henrikh Mkhitaryan ugu biiray kana qaadan doono Manchester United
Isku darka lacagta ay United uga soo iibsaneyso Borussia Dortmund Henrikh Mkhitaryan waxa weeye €100 million, sida daaha looga rogay qodobada ku jira heshiiskiisa.
Majalada kalsoonida lagu qabo ee Germany, Bild ayaa sheegtay in xiddiga u dhashay Armenia uu uga yimi Dortmund €42m oo Euro una dhiganta £35m halka uu isaga jeebka gashan doono €8m oo Euro una dhiganta (£6.2m oo guno ah.
Sidoo kale Mkhitaryan waxa uu ogolaaday in uu sanadkii mushaar ahaan u qaato €12.5m oo Euro una dhiganta £10m oo Pound , taas waxa ay ka dhigan tahay in uu toddobaadkii qaadan doono £200,000.
HIGUAIN oo si lama filaan ah ugu soo biiraya Chelsea iyo Diego Costa oo dib ugu laaban doona Atletico Madrid
GONZALO HIGUAIN waxa uu ku wajahan yahay Chelsea taas oo wadada u xaareysa in Costa uu ku noqdo Atletico Madrid.
Diego Simeone wuu ku guul dareystay helitaankii Laacibka u dhashay Argentinam Higuain oo iminka la qabo In uu caga dhigan doono Stamford Bridge.
Sida laga soo xiganayo AS, Blues waxa ay hada bixin doontaa qiimaha Higuain halka Costa u dhaqaaqii doono Madrid.
Chelsea oo xiiseneysa Graziano Pelle
Tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa la soo warinayaa in uu daneenayo saxiixa weerarka Southampton Graziano Pelle.
Conte wuu ka war qabaa kartida Pelle madaama uu Euro 2016 ku maamulay.
Sida laga soo xiganayo London Evening Standard, Conte iminka diyaar ayuu u yahay soo xero galinta 30 jirka u dheela Saints.
Warar hoose ayaa iyana qabo in Southampton oo toddobadkii hore magacaabay Claude Puel kaas oo badal u noqday Ronaldo Koeman in ay doonayaan iibinta Pelle.
Kooxda ka dhisan magaalo xeebeydka ayaa xagaagan iibisay Victor Wanyama iyo Sadio Mane.
Arsenal oo ku raad joogta Sabotic
Arsenal waxa ay isha ku haysaa in ay soo iibsato daafaca Borussia Dortmund Neven Subotic.
Daafaca u dhashay Serbia waxa uu soo gaba gabeyey waayihiisii Germany sababo la xiriira ciyaar yari. [Il Messaggero]
Roma oo wax yar u jirta saxiixa Thomas Vermaelen
Thomas Vermaelen waxa uu ku dhawyahay in uu aado Roma.
Daafaca u dhashay Belgium, labadii sano ee uu Camp Nou joogay waxaa hareyey dhaawacyo, hadase Barcelona waxa ay diyaar u tahay in €8 million ku fasaxdo. [Sport]
RASMI: Sami Khedira oo seegi doona kulanka Semi Final-ka ee France
"Ku soo dhowaada Cadaabta" – Sidaa waxaa Dalxiisayaasha Rio ku soo dhoweynaya Booliiska Waddankaasi!... + Sawirro